Ogaden News Agency (ONA) – Norway Kaalinteey ka qaadan kartaa arimaha Itoobiya?
Norway Kaalinteey ka qaadan kartaa arimaha Itoobiya?
Posted by ONA Admin	/ November 19, 2012
Cinwaankan wuxuu halku dhag u ahaa shirweyn oo ay isugu yimaadeen dhamaan dhinacyada ay khusayro arimaha Itoobiya. Shirka wuxuu ka dhacay maanta oo ay taarikhdu tahay 19.11.2012 (aqalka literature-ka) ee ku yaala caasimada wadanka Norway.
Shirka waxaa soo abaabulay wasaarada arimaha dibada ee Norway: waxaana shirka gudoonkiisa fadhiyay.
1. Heiki Holmås (wasiirka horumarinta norway)
2.Morten Høglund(oo ah wakiilka xisbiga frp. gudiga difaacana kamid ah)
3.Espen Villanger ( oo u shaqeeya machadka christian michelsen ee arimaha diblomaasiyada)
4. Jan Egeland ( oo ah madaxa human rights watch ee yurub) horana u ahaa ku xigeenka wakiilka qaramda midoobay ee arimaha xuquuqul insaanka.
5. Lovise Aalen (cilmibaare u shaqeeya machadka christian michelsen) kuna takhasustay arimaha itoobiya buugaagna ka qortay.
Waxaa kale oo shirka kasoo qayb galay aqoon yahano, siyaasiyiin, haayadaha dowlada ee kala duwan, xisbiyada dalka norway & suxufiyiin kala duwan oo norway ah. Waxaa kale oo shirka lagu marti qaaday ururada kala duwan ee diasporaha arimaha itoobiya khuseyso sida.
1. justice for ogaden organisation.
2.ethiopian democratic change.
3. ururo kale oona magacooda helin ama lasheegin.
Shirka waxaa furay wasiirka horumarinta ee Norway heiki holmås wuxuuna sheegay in shirka maanta loo furay in laga doodo doorka ay Norway ka qaadan karto arimaha itoobiya. Wuxuu heiki sheegay in itoobiya mudooyinkii udambeeyay dhinacyo badan horumar ka gaartay marka laga reebo dhinacyada xuquuqul insaanka ama saxaafada iyo doorashada.
Waxaa kale oo shirka ka hadlay espen villanger oo sheegay meesha ay kutaal Itoobiya, wadamada ku xeeran, doorkeeda Sudaan iyo Soomaaliya iyo sida ay horumar uga sameysay dhinacyo badan isaga oo soo saaray qiyaaso aad u maleyso in dowlada Itoobiya gacanta kuso qortay.
Waxaa shirka ka hadlay morten høglund oo frp ah oo sheegay in Itoobiya laga joojiyo deeqda bilaa shuruuda ah, kaalmo bani aadan mooyee aan wax deeq ah oo toos ah la siinin, deeqaha la dhiibina wax cad oo la taaban karo ay ku baxdo.
Waxaa markeeda lagu soo dhaweeyay lovise Aalen oo soo bandhigtay warbixin cajib ah oo kusaabsan nidaamka dowlada Itoobiya ku shaqayso min tuulo ilaa caasimada, waxayna qoraalka ku muujisay sida itoobiya u tahay dal go’aanka oo dhan ay ka godo ururka EPRDF.
Waxaa kale oo shirka ka hadlay john Egeland oo soo bandhigay xaqiiqda dhabta ah ee wadanka Itoobiya ku sugan tahay, iyo in Itoobiya iyo Zimbaabwe ayna wax ay ku kala duwan yihiin jirin. Isaga oo suaal waydiiyay maxaan simbaabwi u taageeri weynay? wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dowlada norway deeqda ay dhiibi xaqiijiso in jidka saxda ah mareyso, dowladaI Itoobiyana lagu cadaadiyo in ay aqbasho horumarinta :
c)doorashooyinku in si cadaalad u dhacaan oo ayna dhicin in hal qawmiyad 94% codkii waan helay iska dhahaan.
Markii khudbadihii la dhagaystay ayaa waxaa lagalay nasasho. Waxaana dib loo furay dood adag oo kasoo qayb galayaasho oo dhan ah loo furay. Ururka Cadaalada Ogaadenya ayaa ahaa qofkii sadaxaad ee fursada u helay fikirkiisa inuu dhiibto iyo suaal haduu qabo. Wuxuuna agaasimaha ururka cadaalada Cali Cabdi S. u sheegay kasoo qayb galayaasha in wadanka Ogaadenya xaalada wanaagsan ee dadka qaarkood cabirayaan ka jirin. Inay dadka ogaadenyana ay ku jiraan xabsi weyn oon cidi soo gali karin, dadka rayidka ahna lagu hayo xasuuq arxan la’aan ah iyo xarig, dil, kufsi aan kala joogsi lahayn.
Agaasimaha ururka cadaalada ayaa sheegay in itoobiya ahayn wadan deeq lagu aamini karo, waayo waa wadanka soo cayriyay haya’daha:
iyo Ururo kale oo dhamaantood loo cayriyay sidii ay Itoobiya u qarin lahayd xasuuqa ay kuhayso shacabka rayidka ah ee Ogaadenya. Agaasimaha ayaa wuxuu dowlada Norway ku booriyay in ay qaataan talada john Egeland ee ah waa in Itoobiya khaladka laga qabto oon lagu taageerin dimoqraadiyad la’aanta oo horumarka iyo xuquuqul insaanka laysku dhinac wado.
Waxaa kale oo xusid mudnaa in wakiil haayad weyn oo nNorway ka socday uu wasiirka horumarka waydiiyay suaal ahayd sidan:
1. ilaa intee ayaan u dulqaadanaynaa tacadiga Itoobiya, isagoo sii raaciyay in ayna suura gal ahayn in dawlad la mid ah Waqooyiga Kuuriya lacag bilaa shuruud ah lagu harqiyo iyadoo aan waxba is badelaynin.
Suaashaas ayaa qosol iyo isku tuur tuur hoolka ka dhex abuurtay .
Wasiirka horumarint ayaa u mahad celiyay kasoo qayb galayaashii shirka, isagoo sheegay in uu natiijadii shirka ula tagi doono
wasaarada arimaha dibada iyo dowlada Norway si ay ugu goaan qaataan.
shirka maanta ayaa wuxuu ahaa shir si wanaagsan loo soo agaasimay dowlada norwayna ay ka heshay wixii ay ubaahneyd si ay u ogaato arimaha wadanka itoobiya iyo dareenka haayadaha iyo ururada kala duwan.
Ururka Cadaalada ogaadenya / www.justiceforogaden.org